सुवास नेम्वाङको टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भने- तपाइहरूको महाधिवेशनमा नआएर हुन्छ ? म आउँछु नि « Name of Truth News : News Portal in Nepal
सुवास नेम्वाङको टोलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले भने- तपाइहरूको महाधिवेशनमा नआएर हुन्छ ? म आउँछु नि
प्रकाशित मिति : २०७८, मंसिर, ३, शुक्रबार १८:२३
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा एमालेको १०‍औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने भएका छन् ।
‘म आइहाल्छु नि। तपाइहरूको महाधिवेशनमा नआएर हुन्छ ? म आउँछु नि’, प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै भेटघाटमा सहभागी एक नेताले भने ।
एमालेको १०औं महाधिवेशन मंसिर १०-१२ गतेसम्म चितवनमा हुने भएको छ ।